China Plastic Crusher Machine emepụta na suppliers | FAYGO
Voltaji: 380V, 3 adọ, 50Hz Arọ: 1200kg
Igwe na-agbagharị: 18pcs Company: Faygo
Ike (W): 18.5kw Dimension (L * W * H): 1500 * 1800 * 2000
Speedgba ọsọ ọsọ: 500rpm / m Model Number: Faygo, PC-600
Ngwa: Plastic imegharị ihe maka iji
Plastic Crusher / Shredder / grinder igwe
Ike Pipe / Profaịlụ Plastic Cruscher
.Dị SWP300 SWP400 SWP600 SWP800
Ike 300kg / awa 400kg / awa 600kg / awa 800kg / awa
Ofu agụba ibu 2 2 2 2
Bugharia bade ibu 12 12 18 24
Ihuenyo oghere 8 10 10 10
Nri uzo ntinye 280 * 320 320 * 450 380 * 600 400 * 800
arọ (n'arọ) 1400 1600 1800 2000
Nke gara aga: Plastic imegharị ihe iji pelletizing akara
Osote: PITA karama igwe igwe
Automatic asọfe igwe N'ihi Plastic Pipe Profile
Ọ na-bụ-eji maka asọfe Pee anwụrụ, alumium anwụrụ, corrugated anwụrụ, na ndị ọzọ ụfọdụ anwụrụ ma ọ bụ profaịlụ. Nke a plastic tube coiler bụ ukwuu akpaka, na-arụkarị ọrụ na dum mmepụta akara.
Efere a na-achịkwa efere; asọfe ịmụta torque moto; na pụrụ iche na ngwá na-ahazi ọkpọkọ, a plastic tube coiler nwere ike ifufe ọjà nke ọma, na-arụ ọrụ nke ukwuu mụ.
Modeldị ihe nlereanya maka ihe nkedo a tube: 16-40mm otu / okpukpu abụọ efere akpaka plastic tube coiler, 16-63mm single / double plate automatic plastic tube coiler, 63-110mm otu efere akpaka plastic tube coiler.
Nke a Akpaaka CGF Wash-filling-capping 3-in-1 Water Filling Machine a na-eji mepụta mmiri ịnweta mmiri, mmiri dị ọcha, ihe ọholicụholicụ na-aba n'anya na mmiri Liquid ọzọ.
Enwere ike itinye igwe a n'ọrụ ụdị igwe plastic dị ka PET, PE. Karama size nwere ike ịdị iche na 200ml-2000ml ugbu ole na ole mgbanwe bụ mkpa.
Ezubere ihe nlereanya a nke igwe juputara maka ikike ala / etiti na obere ụlọ ọrụ. Ọ na-ewe obere ego ịzụ, obere mmiri na oriri eletriki yana ohere ole na ole na-arụ na mbido.
Automatic anwụrụ bell igwe
1.this usoro nwere ike esichara Φ16-1000mm ọ bụla anwụrụ flaring
2.with akpaka nnyefe tube.flip tube.flaring ọrụ
3.na kpo oku.cooling.timing.automatic.manual function
4.the modular imewe nke mmiri
5. obere, obere mkpọtụ
6.the ojiji nke agụụ adsorption.flaring a doro anya profaịlụ.size nkwa
7.power (jiri ya tụnyere ngwaahịa ndị yiri ya. Ike ịchekwa ike 50%)
8.nwere ike ahaziri dị ka onye ọrụ chọrọ pụrụ iche nkọwa